तमलोपामा यो के भइरहेको छ ? | सहारा टाइम्स
Home » Bichar » तमलोपामा यो के भइरहेको छ ?
तमलोपामा यो के भइरहेको छ ?
saharatimes Tuesday, August 30, 20160No comments
तमलोपाको ७४ सदस्यीय कार्यसमिती महाधिबेसनको २ महिनापछि सार्वजनिक गरिएको छ । नामावली हेरेर किंकर्तब्यबिमुढ र बिस्मित भए । जनलज्जाको समेत खयाल गरिएको छैन । यसो विचार गरे, तमलोपामा यो के भईरहेको छ ? पार्टी समाप्त पार्न नेतृत्व स्वयं नै किन कस्सिएका छन ? संसार नै समानुपातिक समावेसीको बाटोमा अघि बढिरहेको बेला तमलोपा स्वयंमले अंगिकार गरेको समानुपातिक समावेसी सिद्धान्तको खिल्ली उडाउन किन तल्लीन छ ?
मधेसको धारातलिय यथार्थ र समाजिक संरचना विरुद्ध किन एउटै जातको पार्टी बनाउन खोजेको हो ? मधेस र मधेसीसँग विभेद भयो, राज्य समावसी चरित्रको भएन, एउटै जात र समुदायको हालिमुहाली भयो यी र यस्तै प्रश्नहरु उत्तर दिन, तमलोपाको जन्म भएको हो र यही कुरा तमलोपाको अवधारणापत्र, विधान र घोषणापत्रमा पनि उल्लेख छ । तर पनि किन आफ्नै न्गष्मष्लन एचष्लअष्उभि बिरुद्ध तमलोपा नेतृत्व गइरहेको छ ? कुरा बुझि नसक्नु छ ।
वर्तमान १३ जना पदधिकारीमा मधेसको पहिलो जनसङ्ख्या (१८ लाख ) भएको थारु समुदाय एउटा पनि नपर्नु, दोस्रो मुस्लिम (१४ लाख्) एउटा पनि नपर्नु, तेस्रो दलित (१० लाख) एउटा पनि नपर्नु तर मधेसकै सबभन्दा पुच्छार मध्येको एक जाती जसको जनसङ्ख्या १ लाख पनि छैन (मधेसी ब्राम्हण) बाट ७ जना (बहुमत) पदाधिकारी नियुक्त गरेर कुन चांही समानुपातिक समावेसीको मोडेल प्रस्तुत गर्न खोज्नु भएको हो ? ७४ जनाको कार्यसमितिमा २० जना ब्राम्हण कुन विधान टेकेर भर्ती गर्नुभएको हो ? तपाईले पढ्नु भएको समानुपातिक समाबेसीको परिभाषा यही हो ?
तपार्इले मधेसी जनतालाई दिने समाजिक न्याय यही हो ? तपाईले मधेसी जनतालाई देखाएको मधेस मुक्तिको सपना यही हो ? यसरी सफल हुन्छ मधेस मुक्ती आन्दोलन ? तपाईले राज्य समक्ष माग गरेको राज्यको हरेक अंग, तह, र निकायमा मधेसी, आदिवासी जनजाती, दलित, महिला र मुस्लिमको समानुपातिक समाबेसीकरणको एजेण्डा पहिला आफ्नै पार्टीभित्र लागु गर्नुहोस ।
भनिन्छ, ूसंसार बदल्नु छ, सुरु आफैंबाट गर्नुछ्ू । पहले अपना घर बनाइए फिर देश बनानेको चलिएगा । जय हो मधेस
(उहाँ तमलोपाका नेता हुनुहुन्छ)